Bonke abantu bafuna sokuthanda nokuthandwa. Kodwa kaningi kakhulu guys siyesaba uthi ngemizwa yakhe intombazane, ngaleyo ndlela ukubambezeleka zikhathi ezimnandi uyahlanganyela nentokazi lovely unomphela. Nokho, uma umuntu omusha ngezikhathi ezithile ukuze ubonise: "Indlela ukungitshela ukuthi ngiyamthanda," kuyasiza lesi sihloko, okuyinto uyoziphonsa iseluleko esiwusizo mayelana nale ndaba.
Indlela 1. Izinhlamvu
Indlela elula ukutshela ngemizwa yakho - ukukwenza engekho. Phela, cishe kwakungadingeki uze othi awube ne uyangingiza namazwi kuyofinyelela intombazane ifomu enhle. Nokho, le ndlela kokubonwa has nezihibe. Ngempela, i samuntu ezinjalo, umfana nje abakwazi ukubona izintokazi ukusabela kokuqala Ungenezeli emazwini akhe, futhi kubaluleke kakhulu futhi ongamtshela eziningi. Ngakho, inguqulo ebhaliwe. Singakhumbula zabuna futhi topstitch intombazane incwadi romantic eside, wamthuma okuthunyelwe ijuba. Kodwa izintokazi yesimanje musa bahlale bekwazisa mzamo lapha. Futhi namhlanje ngenkathi laba bahleki futhi pragmatists, ngakho kungcono ukukhuluma kafushane futhi iphuzu, ikakhulukazi ngaphandle kokuya imininingwane futhi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ahlukene. Inketho ekahle kungaba SMS. Nokho, le ndlela akuyona ekahle umbhangqwana wahlangana isikhathi eside. Sms-ku, ungathumela intombazane ukuthi umfana nje ngemvume noma esezohlangana, kodwa kakade ngokujulile uthando naye. Okubalulekile njengoba umbhalo womlayezo. Lokhu kungaba amagama amathathu ezibaluleke kakhulu, kodwa ungakwazi nje isu at imizwa yakhe. izinhlamvu Ifomu kungaba noma ikuphi - temibhalo yephrozi netindzaba noma izinkondlo, kungenzeka ukusebenzisa imigqa sihluke iculo noma aphorisms.
Indlela 2. okwakhe
Uma umfana ecabanga: "Indlela ukungitshela ukuthi ngiyamthanda," kungase kube ukuhlakanipha ukwenza okuthile yasekuqaleni nenekazi yakhe. Ngakho, kungani ungathathi indlela uyisidala futhi bacule misindo ngaphansi efasiteleni othandekayo wakhe? Ungase futhi ukubhala phezu kwendawo egandaywe ngamatshe ukuqashelwa ozithandayo ngemibala egqamile noma ngamakhrayoni. Njengoba okukhethwa kukho: uhlele billboard, welule efasiteleni lakhe iphosta, njll nazo zonke ezaziwayo futhi kulindelwe umusho "Ngiyakuthanda."
3. Inqubo Romance
Ungaya ngendlela ethé ukuhluka kancane, futhi le ntombazane uzwakala umnandi - inkulumo ethi "I love you" ukusho enhle. Ukuze wenze lokhu, kumele ucabangani mayelana isenzo sakho iskripthi. amantombazane Ngakho abaningi abafana version zakudala nge Prince. Ungabuza othandekayo wakhe ukuza epaki, bese ngibuya ipera enhle mhlophe izingubo ezifanele futhi lapho wonke amehlo uyovalwa ngesikhathi umbhangqwana, wathi amagama abalulekile kakhulu. Uma ukhetha okukhethwa kukho kulula, kungani ungaceli intombazane endaweni yokudlela, kodwa umbono omuhle ngefasitela (unga phezu ithala ehlobo) , kanye nomculo bukhoma futhi isivele isimo efanelekayo sokuvuma imizwa yakhe.
4. Indlela wamaqhawe
Uma umfana ubuza umbuzo wokuzihlola: "Indlela ukungitshela ukuthi ngiyamthanda?", Kungani ungazizwa sengathi iqhawe? Udinga nje ugcine intombazane ngesikhathi esithile phakathi umfutho eliphakeme imizwelo sokuvuma imizwa yakhe. Ingabe kufanele, yebo, ulungise lesi simo. Kungaba yini? Ungakwazi nje cela abangane bakho ukungethusa kwentombazanyana ngubani Izobuya, isibonelo, ekhaya noma emsebenzini wesikole. wasemuva livela esifanele, kamuva bese usho umusho like, "Ngingakwazi kanjani nje ukulondoloza othandekayo wakhe?". Kodwa-ke kusadingeka ukutshela intombazane mayelana lezisekelo, ngoba ngesinye isikhathi ke kuyodingeka ukuhlangabezana nalezi abangane efanayo.
5. Indlela ezihlekisayo
Enye indlela impela, uma umfana ecabanga: "Indlela ukungitshela ukuthi ngiyamthanda?". Kungani singavumi ukuthi intombazane futhi emizweni ayenayo ihlaya. Ungakwazi umane zikhiphe ekhaya lakhe esikoleni wathi ibinzana zokuphola main - "I love you" - futhi nje sibheke ayekucabanga. Uma konke uya kahle, kubalulekile waphinda ukukholisa umama wakulowo inhliziyo, uma kungekhona - umane ukuhumusha konke ibe ihlaya futhi sihleke ndawonye.
Indlela 6. esidlangalaleni
Ungakwazi ukumemezela imizwa yakho ukuze umhlaba wonke. Lapha ungakhetha inombolo ehlukile ngezindlela. Buza umshayeli tram ukuboleka isikhathi esifushane ilawudispikha futhi ukutshela wonke umuntu (futhi okubaluleke - intombazane, okumele e ngemoto efanayo) ngemizwa yabo, kungaba ku isimiso esifanayo futhi isenzo enxanxatheleni yezitolo. Kungenjalo, utshele umsakazo wendawo noma ithelevishini, uma uthanda, ungakwazi ukuhlela futhi. Kungenzeka ezahlukene, kodwa ungaqala njengoba inganekwane, "Manje ngifuna ukusho ukuthi ngimthanda kangakanani intombazane okuthiwa ...".
7. I Culinary indlela
Ungamtshela lady imizwa yakhe ngosizo ukudla. Ngakho, udinga ukubhaka noma oda amakhukhi khekhe (njengoba eshisiwe amakhukhi), kodwa isiqephu ngasinye ungayixotshi isifiso, kodwa Ipheshana ngamazwi athi "Ngiyakuthanda." Futhi konke lokhu ukwethula othandekayo wakhe. Isimiso esifanayo ukuqhubeka nezinye izitsha. Fun futhi original uyobheka amadombolo phakathi ukuqashelwa, okungase aphathe inhliziyo lady.
8. Isipho indlela
Ungase futhi unike intombi yakhe a Yethula encane, futhi amenze inothi kancane lapho umusho lelandzelako ingangeniswa kulotshiwe ukuthi: ". Ngqo, ngakho konke uzokutshela le-teddy bear cute" "Ngesaba ukukutshela" Ngiyakuthanda Phela, isipho, yebo, thumela cute Mishutka. Nokho, ukuze wenze isipho esinjalo ungcono ngeposi futhi iphasela elula ukuthumela ekhaya noma ukusebenza courier abawuthandayo.
9. Indlela Yomphakathi
Uma Umuntu Ufunda umcabango "Ngifuna ukusho" Ngiyakuthanda ", kodwa angazi kanjani," kungani ungakwenzi kwabanye? Ngakho, ungase ukwazi ukuhamba ngezinyawo kuleli paki nentombazane, tshela izincomo zakhe ezahlukene ngesikhathi esithile nje ukuba imemeze kakhulu ethi: "I love you", futhi wachaza ukuthi bengifisa wonke umuntu ukwazi, futhi baba nomona ke. Kungenjalo, ungakwazi ekhuphukela isinyathelo eliphakeme, okuzokwenza siwela phezu kwanoma iyiphi indlela, futhi umemeze ngemizwa yabo emhlabeni wonke.
10. Indlela epholile
Awu, elula, kodwa indlela eqinisekile sokuvuma imizwa yakhe - nje ukutshela athandwayo yazo zonke inkulumo ethi "I love you" linye. Ngaphandle ofakazi. Kungase nje kube umhlangano, ingxoxo reverse, slow dance ngesikhathi disco. Khetha isikhathi ukuqashelwa akunzima, ngoba esikahle njalo ngokwanele. Into esemqoka - ungesabi futhi musa namahloni ukukhuluma ngemizwa yabo, ngisho noma akuzona okuhambisanayo. Zama njalo kunesidingo, ngoba ngezinye izikhathi kuba indlela kuphela esiphethweni esiphumelelayo kuqhubeka icala.